ग्रामीण विकास लघुवित्तको शुक्रवारदेखि हकप्रद विक्रीमा, कति कित्ता जारी हुँदै ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी ग्रामीण विकास लघुवित्तको शुक्रवारदेखि हकप्रद विक्रीमा, कति कित्ता जारी हुँदै ?
on: May 09, 2019 लगानी
ग्रामीण विकास लघुवित्तको शुक्रवारदेखि हकप्रद विक्रीमा, कति कित्ता जारी हुँदै ?
वैशाख २६, काठमाडौं (अस) । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले शुक्रवारदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ६५ करोड ५० लाखको आधारमा एक शेयर बराबर शून्य दशमलव पाँच शेयर (१ः०.५) को अनुपातमा ३२ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर जारी गर्न लागेको हो । यस हकप्रद प्रयोजनका लागि कम्पनीले चैत २९ गते बुक क्लोज गरेकाले चैत २८ गतेसम्म कायम सदस्यहरुले मात्र आवेदन गर्न पाउनेछन् ।
गरीबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले साविकमा क्षेत्रिय स्तरमा स्थापना भएका पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकहरु एक आपसमा गाभिएर ग्रामीण विकास लघुवित्तको रूपमा स्थापित भएका हुन् । यस कम्पनीले २०७१ साल साउन २० गतेदेखि एकिकृत वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ । अधिकृत पूँजी रू. १ अर्ब रहेको यस कम्पनीको जारी पूँजी रू. ९८ करोड २५ लाख रहेकोमा हालसम्म रू. ६५ करोड ५० लाख चुक्ता भईसकेको छ । यस हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९८ करोड २५ लाख पुग्नेछ ।
कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३३ दशमलव ४७ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १६ करोड ४४ लाख १७ हजार खुद नाफा गरेको छ । यस हकप्रद विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले लिएको छ । आवेदनका लागि सि-आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण कार्यालय र मेरो शेयर एप मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिनेछ । वैशाख २७ देखि जेठ ३० गतेसम्म ग्रामीण विकास लघुवित्तको हकप्रद विक्रीमा रहनेछ ।
ग्रामीण विकासको सञ्चालकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिष्ट
ग्रामीण विकास लघुवित्तको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने अन्तिम दिन बिहीवार
ग्रामीण विकास लघुवित्तको नाफा १६ करोड